सांसदविरुद्ध बलात्कारको आरोप, प्रहरीद्वारा छानविन सुरु::– Nepal's Digital Paper
१सुन तस्करीमा को हुन् पर्दा पछाडिका नायक , गोरेले खोलिदिय सबैको पोल
२गोरेले लिए सुन तस्करीमा संलग्न अन्य व्यक्तिको नाम ! हेर्नुहोस अरु को को हुन् ?
३पक्राउ परे लगत्तै यस्तो भने गोरेले, गृह मन्त्रालय देखि विमानस्थल सम्म मच्चियो हंगामा
४पोर्न फिल्म हेर्दाहेर्दै यी युुवकले काटे आफ्नै यौनांग
५भाइरल ज्वरोको अनुगमन गर्न जाजरकोट पुगेका मन्त्रीको बिल १८ लाख !
६अब म प्रधानमन्त्री होइन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति बन्छु : प्रचण्ड
७नीति तथा कार्यक्रमबारे यस्तो छ बाबुराम र देउवाको प्रतिक्रिया
८मलेसियामा जाने कामदारको भिसा सोमबारदेखि बन्द
९संविधान संशोधनमा गोप्य सहमति भएको प्रचण्डको खुलासा
१०दश वर्ष भित्रै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सम्मानित बनाइने
११सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा युवालाई स्वरोजगार लाई
१२मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिका जान रोके पछि यस्तो भने मुख्यमन्त्री राउतले
१३खनाल र रावलले भने अहिलेको निर्णय कुनै हालतमा स्वीकार हुदैन !
१४७ सांसदले रातो पासपोर्टका लागि सिफारिस पाएनन्
१५फेरि अर्को सकसमा परे केपी–प्रचण्ड
सांसदविरुद्ध बलात्कारको आरोप, प्रहरीद्वारा छानविन सुरु
एजेन्सी– भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टीका एकजना सांसद विरुद्ध बलात्कारको आरोपमा अनुसन्धान सुरु भएको समाचार छ । उनी बिरुद्ध परेको उजुरीको छानबिन प्रहरीले बिहीबारबाट सुरु गरेको जनाएको छ । सो अनुसन्धानको समाचारले भारतीय मिडियामा ठूलो चर्चा पाएको पनि नयाँ दिल्लीबाट प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ ।
भारतीय जनता पार्टीको उत्तर प्रदेशका राज्यसभा सांसद कुलदिप सिंह र उनका एकजना भाइ विरुद्ध एक १६ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ ।
त्यससम्बन्धी उजुरी परेकोले प्रहरीले बिहीबारबाट उक्त फाइल अध्ययन गरेको जनाएको छ । तर प्रहरीले भने कानुनी रुपमा के कसरी अनुसन्धान अघि बढाउने भन्ने बारेमा त्यति स्पष्ट देखिएको छैन ।
एकाउन्न वर्षीय सांसद सिंह सो प्रदेशको एकजना शक्तिशाली राजनीतिज्ञ हुन् । सोही कारण प्रहरीले उनलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिन पनि नसकेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
उक्त प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले उनलाई नियन्त्रणमा लिन अनुमति नदिएसम्म प्रहरीले अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्न पनि सकेको छैन । उत्तर प्रदेशका प्रहरी प्रमुख ओमप्रकाश सिंहले भने– सांसद सिंहका विरुद्धमा बालिका बलात्कारको मुद्दा परेको छ र यसमा अब प्रहरी कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा हामी सल्लाह गरिरहेका छौँ ।
गतवर्षको जुन महिनामा ती बालिकालाई अपहरण गरी बलात्कार गरिएको बताइएको थियो । पछि अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले ती सांसदलाई नियन्त्रणमा लिन सकेको थिएन । गतहप्तामात्र ती बालिकाको बुवालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो र निर्घात कुटपिट गरेको बताइएको थियो । प्रहरीको कुटपिटबाटै ती बालिकाका बुबाको प्रहरी हिरासतमै निधन भएको छ ।
ती बालिकाले आफ्ना बुबालाई प्रहरीले ती सांसदका विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिएको र प्रहरीकै कुटाइबाट निधन भएको भन्दै गत शनिबारमात्र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको निवासअघि आत्मदाह गर्ने प्रयास गरेकी थिइन ।
यो घटनाले भारतीय सञ्चारमाध्यममा ठूलो चर्चा पाएको छ । उनीहरुले प्रहरीले पीडितलाई न्याय दिनुको सट्टा उल्टै पीडा दिएको भनी समाचार प्रकाशन, प्रशारण गरेका छन् । भारतमा यस्ता बलात्कारका घटनामा वर्षेनी बृद्धि भइरहेको बताइन्छ । पछिल्लो वर्षमात्र अर्थात् सन् २०१७ मा मात्र कम्तीमा पनि ४० हजार बलात्कारका घटना दर्ता भएका छन् ।
पाकिस्तानमा तातोहावाका कारण ६५ को मृत्यु
पूर्वी अफगानिस्तानमा तालिबानसँगको झडपमा १२ प्रहरीको मृत्यु
चीनको बमवर्षक विमान विवादित दक्षिण चीन सागरमा !
अमेरिकाको कारण फेरी बिग्रिदै दुई कोरीयाली समबन्ध
विमान दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेहरुको संख्या ११०,ब्ल्याक बक्स भेटियो अनुसन्धान सुरु